Iwo akanakisa ekunyorera kuongorora zvinyorwa neako iPhone | IPhone nhau
Iwo akanakisa ekunyorera ekuongorora zvinyorwa neako iPhone
Gwaro scanners iri kuwedzera kusashanda kwe Hardware. Kunyanya nekuti mhando yeiyo faira rePDF iro rinowanzo kupihwa kwatiri haripfuure hunhu hwemufananidzo wegwaro. Nekudaro, dambudziko nemapikicha muzviitiko zvakawanda nderekuti fomati yakanaka yekutumira nekugamuchira magwaro ndeyePDF, mukuwedzera kune kugadzirisa uye matambudziko ekupenya.
Kune ese ayo isu tine akateedzana ezvimwe nzira zvekutora magwaro zvakananga kubva ku iPhone yedu izvo zvinokushamisa iwe nemhando yemafaira yainoburitsa uye masimba ekugadzirisa ayo asingatenderi iwe kusiyanisa pakati penyaya yakaverengwa uye yechokwadi
Saka tinoenda ikoko nezvakanakisa kunyorera kuti tiongorore magwaro atinogona kuwana muApple App Store kuti tishandure iPhone yedu ive scanner inotakurika yaungangodaro usina kumbofungidzira.
Ini ndichatanga nechandinofarira chishandiso, CamScanner ndiyo iyo yakandipa mhinduro dzakanakisa mune yayo yemahara sarudzo. Kuongorora magwaro nekutenda kuCamScanner kuri nyore, sezvo iine tekinoroji iyo inokurumidza kuchinjisa iyo mufananidzo kune chaiyo furemu, saka mativi haazoonekwe zvakaipa. Pakarepo mushure mekutora kubatwa, inoongorora gwaro, uye zvakare ine OCR inozoziva iwo mavara mumifananidzo, kunyangwe iyi sarudzo ichibhadharwa.
Tinogona kuchengeta mafaera edu mu PDF uye JPEG, pakusarudza kwedu, uye chinhu chakanyanyoenderana ndechekuti ine kuenderana kwemakore makuru pamusika.
Iwo anozivikanwa manotsi uye manejimendi app haigone kushaya akakodzera shamwari Isu tinotaura izvozvi nezve Scannable, imwe yemahara imwe nzira yatinogona kushandisa zvizere zvakabatana naEvernote. Iyo inokwanisa kupenengura magwaro nekukasira, kuwedzera pakuzvigadzirisa zviri nyore, chimwe chinhu chakakodzera. Tinogona kutenderera, kurima uye kugadzirisa mufananidzo kuti zviite nyore kuverenga sezvinobvira.
Kune rimwe divi, ichi chishandiso zvakare inokwanisa kuongorora mabhizinesi emakadhi uye kugadzira mahukama kubva kwavari, ibasa iro mamwe ese maapplication atichazoshandisa nhasi kushaya uye zvinokukurudzira kuti uzviwane pamusoro pevamwe. Nerutsigiro rweEvernote, zvinonetsa kuti isu tirege kuvimba nayo, uye pamusoro pazvose nekuti zvakare yemahara.
Microsoft Lens: PDF Scannervakasununguka
Imwe nzira yeMicrosoft. Ichi zvakare chimwe chevandinoda, chobva changoziva mufananidzo watinoda kuongorora kuti tienderane nezvido zvako. Chimwe chezvinhu zvakakosha zveHofisi Lens ndechekuti gadzirisa gwaro kuti mavara aite nyore kuverenga, zvakaoma kuti utore zvisirizvo kuitira kuti Hofisi Lens irege kuiona nemazvo uye igadzire gwaro rakakwana, ndosaka iri iro rinokurudzirwa zvakanyanya kana usiri wekutora mifananidzo nekutora muimbi, chokwadi.
Iyo zvakare yemahara, asi isina kunaka poindi ndeyekuti inoisa zvipingamupinyi zvakawanda pakutumira magwaro kana usinga shandisa Hofisi 365 kana Dropbox, haina rusununguko rwakawanda munzvimbo iyoyo, uye ndicho chikonzero chikuru nei ndakapedzisira ndasarudza CamScanner. Nekudaro, kana iwe ukashandisa iyo Microsoft Office kana Dropbox nharaunda, ndiyo yakanakisa application iwe yaunogona kushandisa, zvachose yemahara uye yakakurudzirwa.
iScanner - PDF Scannervakasununguka
Mumwe wevakuru pane iOS App Store. Iyo yemahara sarudzo inotibvumidza isu kuchengetedza uye kutumira mukati PDF gore rese rinozivikanwa kwazvo rinotora, Dropbox, Evernote, Yandex Disk, Bhokisi, OneDrive kana Google Drive, saka hapana chaungarasikirwa nacho chero.
Iyo zvakare ine otomatiki kumucheto kuona, saka inoenderana. Pamwe ichave nekuda kweiyo interface, asi haisi yangu yandinoda, zvisinei, ndizvo imwe yeanonyanya kufarirwa paIOS App Store nekure, saka isu tinofanirwa kutaura nezvayo uye nekuikurudzira kwauri kana iwe uchida kuitarisa zvakanaka. Uye neizvi, tinoti kuonekana nemusi weMugovera uyu masikati.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Iwo akanakisa ekunyorera ekuongorora zvinyorwa neako iPhone
Ini ndinonongedza iwe Scanbot, inova yakanakisa yandakamboedza.
Iyo yakanakisa kunyorera kuongorora magwaro, pasina kupokana, ndeye Scanner Pro!
Pindura ku sc163022